बिस्वास, भ्रम अनि सम्बन्ध - Sabal Post
३ पुष २०७७, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
गणेश प्रसाद न्यौपाने, बुटवल, पौष ३ ।तपाईं खुसी त हुनुहुन्छ नि ! हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न तपाइको कुरा हो ! अनि त्यही समय आउदा कहिकतै प्रेममा त हुनुहुन्न कि हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि तपाइकै कुरा हो ! तर तपाइले कति सम्म साँचो प्रेम गर्नुभयो या समय ब्यतितको साधन पो बनाउनु भयो कसैलाइ यो एक बहसको बिशय हो ! तपाईं कुनै सम्बन्धमा हुनुहुन्छ मानौ त्यो प्रेम होस या मित्रताको या वैवाहित सम्बन्ध या अभिभावक बालाखाको सम्बन्ध! के तपाईं त्यस सम्बन्ध प्रती सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि त्यो सम्बन्ध प्रती त्यतिनै बफादार हुनुहुन्छ जति तपाईं हुनुपर्न थियो जति तपाईं आश्रीत ब्यक्तिमा बिस्वास जताउनु भएको छ ! प्राय पछिल्लो समयमा भ्रमित सम्बन्ध धेरै सिर्जना गर्न सम्बन्धको मर्म नबुझेर सम्बन्ध बनाउने अनि त्यही सम्बन्धमा आफ्नो इच्छाशक्ति कमि हुनासाथ पाखा लगाउने प्रवृत्ति मौलाउदै गएको छ ! अझ भन्नी हो भने आफ्ना इच्छा पूरा भएपछी सम्बन्ध ब्यक्ती अनि दुरि सबैलाइ समय ब्यतितको साधनको रुपमा पाइएको छ ! घर गृहस्थि सम्हालेकि श्रीमतीलाई घरकाको भन्दा परकाको ख्याल हुने, घर छोडेर हिडेको श्रीमानले राती रातिमा अर्कैकी तिर आँखा ताक्ने उदाहरण टोलै पिच्छे देखिन थालिसके ! के त्यही श्रीमती र त्यही श्रीमानले आफू आफुले गरेका ती लिला लाई उनिहरु बेला हो बेलामा हुन्छ भनी सहजता साथ व्याख्या गर्न सक्लान तर त्यही कुरा एक अर्का को थाहा पाए के सक्छन त !
१ बर्ष अघि प्रेम गरेका प्रेमीप्रेमिका बिचको कुरा त अझ भिन्नै छ ! यता एउटालाई मेलो बेबि थाना थायौ देखि मेरो रानिले खाना खाइबक्सियोस सम्म फरक फरक ब्यक्ती एकै खालको सम्बन्धको नामाकरण त हिजो आज5मध्य एक जोडि भेटिन्छ कि ! जब सम्बन्ध छ सब ठिक ठाक जब सम्बन्ध छैन पशु सँगै नाम जोडेर नभएको काम को ब्याख्या गर्न प्रेम समूह न हो अहिलेको समाज को ! जहाँ एउटालाई दरबार अनि अर्कोलाइ घरबारको सपना सजाइएका हुन्छन ! केही सम्बन्ध यसरी समेत जोडिएकि जहाँ आफ्नो तृष्णा मेटाउनको निम्ति भएपनी सम्बन्ध त चाहियो चाहियो ! एक हैन दुई सम्बन्ध नै भएपनी फरक खाएन तर सम्बन्ध चाहियो ! बैकल्पिकमा अन्य ब्यक्ती राखेर सम्बन्ध जोडिन्छन ! एउटा बन्यो सकियो बैकल्पिक को पालो जब बैकल्पिक पदमा हुन्छ अर्को बैकल्पिक मा आइसक्छ यहाँ करार वाला प्रेम भेट्नुहुन्छ बाटै पिच्छे स्थायी कर्मचारि पाउन गार्हो छ ! यो प्रेम अनि जागिर एउटै छ मात्र यति फरक को सम्बन्धमा अनुभव नभएको खोजिन्छ त्यसैले अनुभव लुकाइन्छ अनि जागिरमा अनुभव चाहिन्छ त्यसैले अनुभव हुन्न तर मिलाएर अनुभव चाहिँ छ है भन्नी गराइएकै हुन्छ ! जब दरबन्दि आउँछ नि तब अनुभब छैन भन्नि खोज्नुहुन्छ तर उसमा कति सम्मको करार वाला अनुभव छ थियो त्यो त समयले बताउला व्यबहार त कुचोलाइ झाडु भन्दा डाडु ल्याएर दिने हुन्छ केही समय ! तर सुनिदिनुहोस त ! तपाइले कसैलाइ समय ब्यतितको साधन बनाउनु भएछ भन्नी कुराले तपाइलाइ कुनै फरक पार्दैन तर त्यही समय ब्यक्तितको साधन तपाईं बन्नु भएको छ है भन्दा कस्तो हुन्छ ! कहिल्यै मनमा यो प्रश्न उठेको छ ! के तपाइकै ठाउमा तपाइको बैनी भए के तपाईं त्यो सम्बन्धको पक्षमा बस्न सक्नुहुन्छ !
के तपाइकै भाइ त्यो ठाउमा हुदा तपाइको निर्णय के हुन्छ ! तपाईं त्यो स्थितिमा तपाईं आफ्नो भाइ बैनिलाइ त्यही सम्बन्ध प्रती बफादार बन्न भन्नुहुन्छ भनी तपाइलाइ स्वागत छ कि तपाइ के हुनुहुन्छ आफै बुझ्नु तर त्यहि सम्बन्ध त्यही व्यवहार त्यही साधन कसैको तपाईं बन्दै गर्दा जस्तो महसुस तपाईंलाइ हुन्छ त्यो भन्दा कम धेरै महसुस अर्को मान्छेलाइ नि हुने गर्छ ! हो दुनियाँ धेरै अगाडि पुगिसक्यो तर मानव जगत बिस्वास अनि सम्बन्धमा बाचेको हुन्छ ! हरेक व्यबहार अनि खुसी सन्बन्ध अनि बिस्वास कै आँडमा छन ! कसैलाइ आज मन दुखाउदै गर्दा भोलि मलाइ यस्तै परे म के गरुला भन्नी सोचका साथ अघि बढ्नुहोस ! मानबिय ब्यबहारमा बिकल्प अनि प्रयोगको सोच कहिल्यै नराख्नुहोस ! आज कसैलाई तपाइले बैकल्पिक राखेर भोलि तपाईं कसैको बैकल्पिक पर्दा कस्तो हुन्छ स्मरण गर्नुहोस त ! कसैलाइ राम्रो गर्दै गर्दा धेरै नसोच्नुहोस त्यो गर्दा तपाईं लाई खुसी मिल्यो किनाइ त्यही सोच्नु तर कसैलाइ दुख दिदा त्यही स्थिती आफू वा आफू मातहतको कोहिमा हुदा कस्तो व्यबहार गर्नुहुन्छ के कस्तो लाग्छ त्यही कुरालाइ जहिले ध्यान दिनुहोला !
परीक्षा बोर्डको मिति सर्ने पुरानै रोगः पुरक…
निःशुल्क सदस्यता सम्बन्धमा एनआरएनए अमेरिका उपाध्यक्ष बुद्दी…
सोमबारको दिन के गर्दा भगवान शिव खुशी…